गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेशन कमिटीको फ्यातुलो कार्यक्रम, के भने त संयोजकले? – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsगोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेशन कमिटीको फ्यातुलो कार्यक्रम, के भने त संयोजकले?
गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेशन कमिटीको फ्यातुलो कार्यक्रम, के भने त संयोजकले?
July 7, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, कालेबुङ, मुख्य समाचार, संवाद 0
प्रोग्राम जीएमसीसीकोः नेतृत्व विमल गुरूङकोः कल्याण देवान
गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेशन कमिटीको पहिलो बैठक र यसले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमदेखि जनता सन्तुष्ट देखिएन। यसैलाई सन्दर्भमा राखेर कमिटीका संयोजक प्रा. कल्याण देवानसित खबरम्यागजिनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेशन कमिटीले किन कुनै कार्यक्रम बनाउन नसकेको?
-होइन। कार्यक्रम त बनाएकै छौँ त
खै त जनताको हातमा कार्यक्रम?
नारा जुलुस छँदैछ, बन्द चलिरहेछ। अहिलेलाई यति नै पर्याप्त छ।
यति नै हो कार्यक्रम?
होइन, अरू पनि छ। सप्पै कार्यक्रम खुलासा गर्न मिलेन। राष्ट्रपति चुनाउअघिसम्म यति कार्यक्रम नै पर्याप्त मानियो।
बन्द मात्र आन्दोलन हो? कि अरू पनि केही गर्छ जीएमसीसीले?
बन्द पनि आन्दोलन हो। यो गणतान्त्रिक पद्धति पनि हो।
यो बन्दको आन्दोलन कतिदिनसम्म चल्छ? जनतालाई मार नपर्ने वैकल्पिक कार्यक्रम किन नबनाइएको?
चल्छ, जबसम्म जनता थाक्दैन तबसम्म चल्छ। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, यो बन्द जारी गर्न जनताबाट हामीलाई चाप छ। जनता भन्दैछ- भोकै मर्छौं तर बन्द खोल्नु हुँदैन। जनता कै सुझावमा हामीले बन्द जारी राखेका हौँ। बन्दको कुनै विकल्प छैन। यो कार्यक्रम हो। बन्द पनि आन्दोलन हो। जनता थाक्नु हुँदैन। बन्द जनताले दिएको कार्यक्रम हो।
जनताले त भरोसा लाग्दो कार्यक्रम देउ, आन्दोलनलाई कुनै सानो थोकमा सम्झौता नगर, केही पाउने क्षमताको आन्दोलन गर भनिरहेको छ
हामीले पनि गरिरहेकै छौँ। एउटै बैठकमा सबै कार्यक्रम बनिँदैन। सबै दलले आआफ्ना सुझाव राखिरहेकै छन्। बैठकहरू हुँदै जान्छ। राखिएका सुझावहरूको राम्रो-नराम्रो दुवै पाटा केलाएर कार्यक्रमहरू थपिँदै लगिनेछ।
जनताले तपाईँहरूलाई कार्यक्रम दिनुपर्ने कि तपाईँहरूले जनतालाई कार्यक्रम दिने हो?
सबै पार्टी आफ्ना समर्थकहरूको वा जनताको मान्डेटसितै कमिटीमा छन्। सायद यसैमा यो प्रश्नको जवाब होला
तर पहिलो बैठकको कार्यक्रम हेर्दा त यो कमिटी निक्कै लुते देखियो, जनतालाई थकाउने रणनीतिजस्तो
जनतालाई थकाउने होइन, जनताले भनेकै कार्यक्रम दिइरहेका छौँ। कति कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएन। भर्खर त शुरु गरिएको छ, कुराहरू सङ्गलिसकेकै छैन। एउटा कुरा त पक्का छ कि जनता डराउन पर्दैन, सर्वदलीय सहमतिमा आन्दोलन अघि बढिरहेको छ।
तर केन्द्रले यो आन्दोलनबाट ‘प्रेसर’ अनुभव गरेको त कतै देखिँदैन नी
केन्द्रमा प्रेसर गरेर मात्र हुँदैन। छुट्टै राज्य गर्खाल्याण्डको सर्वदलीय र राष्ट्रीय सहमति पनि बटुल्न अनिवार्य छ। हामीले राष्ट्रीय सहमति तय गर्ने दिशामा पनि सोच्नुपर्छ। अहिले नै केन्द्रमा प्रेसर गरिहाल्दा आन्दोलन नै शिथिल बन्ला। सही समयमा सही रणकौशलसित काम गर्नैपर्छ। हामीलाई अनेकौं चाप छ। हतार गरेर केही हुन्न। केन्द्रमा प्रतिकूल परिस्थिति बनेको बेला प्रेसर गरेर पनि फाइदा छैन।
अहिले परिस्थिति प्रतिकुल छ र?
त्यसो भनेको होइन। परिस्थिति त निर्माण गर्नुपर्छ। सही बेला सही पदक्षेपको बाटो अघि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य हो।
जीएमसीसीले कसरी कार्यक्रम बनाउँछ?
सबै कुरा भन्नु आन्दोलनको स्वास्थ्यको निम्ति हानिकारक हुनसक्छ। तर यति भनौं बैठक बस्दै जान्छ, जस्तो परिस्थिति बन्छ उस्तै कार्यक्रम बनिँदै जान्छ।
जनताले त 18 जुलाई पछि नि बन्द नखोल्नु भन्ला, के गर्नुहुन्छ?
जनताले जे भन्छ, हामी गर्छौँ।
जनताले अपेक्षा गरेको कार्यक्रम चाँही बनिँदैन?
बनिन्छ, एकै बैठकमा कसरी सम्भव हुन्छ र?
भनेपछि 18 पछि तपाईँहरूको योग्यताको पनि जाँच हुनेछ
हामी इमान्दारसित आन्दोलनमा छौँ। जनता थाकेन भने हामी पनि थाक्दैनौँ। सबै कुरा जनतामा नै निर्भर हुन्छ।
सर्वदलीय सहमतिको आन्दोलन पनि भन्नुहुन्छ, सभातिर मोर्चाले गरेको, विमल गुरूङको नेतृत्वमा पनि भन्नुहुन्छ, अलिक बुझिएन नि चरित्र
स्पष्ट छ, सबै दललाई मोर्चाले नै बोलाएको हो। आन्दोलन त मोर्चा र विमल गुरूङकै नेतृत्वमा हुनेछ। तर जे पनि हुनेछ सर्वदलीय सहमतिमा हुनेछ। जीएमसीसीले कार्यक्रम तयार गर्नेछ, त्यो कार्यक्रमलाई विमल गुरूङले नेतृत्व गर्नेछन्। अर्थात जीएमसीसीको प्रोग्राम, विमल गुरूङको नेतृत्व। सबै कुरा मोर्चा नै छत्रछायामा त भइरहेको छ। अहिलेको कार्यक्रम मोर्चाले गरेको होइन सबै दलले एउटै सहमतिमा गरेको हो।
शुरुमा आन्दोलन गर्ने कमिटीमा सर्वभारतीय प्रतिनिधि हुन्छ भनिएको थियो, कमिटी बनाउँदा दार्जीलिङ, कालेबुङ, तराई डुवर्स बाहेक अरू कटियो, किन यस्तो भयो?
आन्दोलनको इपि सेन्टर दार्जीलिङ हो। राज्य दार्जीलिङलाई लिएर नै हुन्छ। इपि सेन्टर कै दलहरूको सहमति र निर्णयमा आन्दोलन अघि बढ्नु पर्थ्यो। त्यसकारण अहिलेलाई इपि सेन्टरकै प्रतिनिधिहरू कमिटीमा लगाइयो। पछि आवश्यक पर्दै गयो भने बाहिरका प्रतिनिधिहरू पनि थाप्न सक्छौँ।
अचानक मोर्चाले कुनै कार्यक्रम फ्याँक्नु पाउँछ कि पाउँदैन?
यदि त्यस्तो परेछ भने जीएमसीसीका निकटवर्ती कुनै सदस्यसित आपलकालीन सहमति लिएर नै फ्याँक्ने छौँ।
अरू दलले पनि त्यसै गर्न पाउँछ?
सहमति त लिनु अनिवार्य नै हुन्छ।
बाल-बालिकाहरु किन चाहन्छन् गोर्खाल्यान्ड?
सीआरपीएफको गोली लागेर टासी भोटियाको मृत्युः यस्तो छ घटना